လာလီဂါဖလား အနားရောက်လာတဲ့ ရီးရဲ ၊ Gay ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြောလာသူနဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
လာလီဂါဖလား အနားရောက်လာတဲ့ ရီးရဲ ၊ Gay ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြောလာသူနဲ့ . . . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ လာလီဂါ ပွဲစဉ် မှာတော့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် အသင်း ဟာ အာလာဗက်စ် အသင်း ကို ဘန်ဇီးမား ၊ အဆန်ဆီရို တို့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေ နဲ့ အနိုင် ရရှိပြီး အဆင့် ၁ နေရာကနေ ဘာစီလိုနာ ကို ၄ မှတ် ဆက်လက် ဖြတ်ထား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ လာလီဂါ စည်းမျဉ်း အရ ဘာစီလိုနာ အပေါ် Head-to-Head အသာ ရထားတဲ့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ဟာ လက်ကျန် ၃ ပွဲမှာ အနည်းဆုံး ၅ မှတ် ( ၁ ပွဲနိုင် ၊ ၂ ပွဲ သရေ ) ရရှိရုံနဲ့ လာလီဂါ ချန်ပီယံ ဖြစ်လာ တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီပွဲမှာ ဂိုးမပေး ရအောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့တဲ့ ရီးရဲ ဂိုးသမား ကော့တွိုက် ကတော့ Clean Sheets ၁၈ ကြိမ် နဲ့ အတူ ၁၉၈၈ ခုနှစ် က အသင်းရဲ့ စံချိန်ဟောင်း ကို လိုက်မီ သွားနိုင် ခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဗီလာ လက်ထောက် နည်းပြ ဂျွန်တယ်ရီ ၊ အင်္ဂလန် အမျိုးသမီး လက်ရွေးစင် နည်းပြ ရာထူး ကနေ နှုတ်ထွက် ထားတဲ့ ဖိလစ် နဗီးလ် တို့ ဟာ ဘရစ်စတိုး စီးတီး နည်းပြ ရာထူး အတွက် ရေပန်း စား နေကြတယ် လို့ သတင်း ကြားသိ ရ ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် နဲ့ ကလပ် အသင်း တာဝန် ရှိသူတွေ ဟာ လာမယ့် အပြောင်း အရွှေ့ ကာလ ရဲ့ ကြာမြင့်ချိန် အတွက် ဆွေးနွေး နေကြတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ ဖလား ပြိုင်ပွဲ ကို အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပမယ့် ကာတာ နိုင်ငံဟာ 2027 ခုနှစ် အာရှ ဖလား ပြိုင်ပွဲ ကိုလည်း အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပဖို့ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် သွားမယ် လို့ ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှုး အိုလီဗာ မက်ဘရိုင်း ဟာ သောက်စား မူးရစ်ပြီး ကားမောင်း ခဲ့တာ ကြောင့် ပေါင် ၃ သောင်း နီးပါး ဒဏ်ရိုက် ခံခဲ့ ရတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
နယ်သာလန် ကွင်းလယ် ကစား သမားလေး ဟာကင် ဇီယက်ချ် ဟာ အသင်းသစ် ချဲလ်ဆီး ထံ ပြောင်းရွှေ့ရေး ကိစ္စတွေ လုပ်ဆောင် ဖို့ အတွက် လန်ဒန် ကို ထွက်ခွာ လာပြီလို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။\_
လက်စတာ စီးတီး နည်းပြ ဘရန်ဒွန် ရော်ဂျာ ဟာ ရီးရဲမက်ဒရစ် က ရောင်းထုတ်ချင် နေတဲ့ တိုက်စစ်မှုး လူကာ ဂျိုဗစ် ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေပြီး ပေါင် သန်း ၃၀ ခန့်နဲ့ ရနိုင်ပါက ကြိုးစား သွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး နည်းပြ မော်ရင်ဟို ကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ဒိုင်လူကြီးတွေ ဟာ ဘောလုံး သမားတွေ ကဲ့သို့ ပွဲအပြီးမှာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ၊ သတင်းထောက်တွေ နဲ့ အင်တာဗျုးတွေ ပြုလုပ်ကာ ပွဲထဲက ဆုံးဖြတ်ချက် တွေ အကြောင်း ရှင်းပြ ပြောဆို သင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်း သွားခဲ့ ပါတယ် ။\_
ချဲလ်ဆီး တောင်ပံ ကစား သမား ဟောင်း ဆော်လ်မွန် ကာလူး ကတော့ ဟာသာဘာလင် အသင်းနဲ့ စာချုပ် ကုန်ဆုံး အပြီး မှာ ဘရာဇီး ကလပ် ဘိုတာဖိုဂို အသင်းထံ ပြောင်းရွှေ့ စာချုပ် လိုက်ပြီလို့ သိရှိ ရ ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ တစ်လတာ အကောင်းဆုံး ကစား သမားဆု နဲ့ သွင်းဂိုး ဆုတွေကို ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် ( မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ) ရရှိ သွားခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံး နည်းပြ ဆုကိုတော့ ဝုဗ် နည်းပြကြီး နူနို ဆန်းတို့စ် က ဆွတ်ခူး သွားခဲ့ ပါတယ် ။\_
ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ကစား နေတဲ့ အမည် မဖော်လိုသူ ကစား သမား တစ်ဦးက သူ ဟာ Gay တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ရေးသား သွားခဲ့ ပေမယ့် သူ့ရဲ့ မိသားစု နဲ့ အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေ အချို့သာ ဒါကို သိထား ကြပြီး လူထု ကို ထုတ်ဖော် အသိပေး သွားဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ် ၊ မဝံ့ရဲ သေးပါဘူးလို့ လည်း ရေးသား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စပါး Vs အာဆင်နယ် တို့ရဲ့ လန်ဒန်ဒါဘီ အပါအဝင်…ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၃၅ အတွက် မိုက်ကယ်အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ
ဟာဗက်ဇ် ကို ခေါ်ယူမယ့် သတင်းတွေ အပေါ် မှတ်ချက်ပေးဖို့ ငြင်းဆိုလိုက်ပြန်တဲ့ #လမ်းပတ်